Ziziphi iimeko zokukhulelwa?
I-arsenal yamachiza anamhlanje inamathuba amaninzi kunye namancedo ekuncediseni abafazi abakhulelweyo ukuba banake baze babele abantwana abasempilo, kwimeko apho ukukhulelwa kwenzeka ngokungaqhelekanga. Ngamanye amaxesha, ukwenzela ukwenza oku, umfazi unikezelwa ukuya esibhedlele ukuze alondolozwe. Ngaloo ndlela, phantsi kweyiphi imeko iya kukulondolozwa ekukhulelweni kunye noko kuyimfuneko, kwaye kuya kubakho inkulumo engezantsi.
Izibalo kwihlabathi zinjalo kangangokuba ezingama-20 kwabantwana abangama-100 abangenabantwana abangenayo intsholongwane. Isizathu esibalulekileyo kukuba kubantwana abanjalo izibalulekileyo ezibalulekileyo asinayo ithuba lokuphuhlisa ngokupheleleyo. Kule meko, ukulondoloza ukukhulelwa kuya kunika umntwana ozayo ithuba lokukhulisa ukukhula kwisibeleko.
Nangona uvakalelwa kakuhle kwaye akukho nto ikuphazamisayo, kwaye i-gynecologist yakho imisela ukulaliswa esibhedlele, ukuze uzikhusele kwisimo esingalindelekanga - uyavuma kangcono. Esibhedlele, ubuncinci uya kuhlala uphambi kweengcali, kwaye ziya kuba nazo zonke izixhobo ezifunekayo. Uya kunikwa yonke into oyifunayo - ukuphumla kwekhefu epheleleyo, uncedo oluphuthumayo xa kwenzeka imeko engalindelekanga.
Ukuba usongelo lokuzalwa ngaphambi kokuzalwa luphantsi, unokuyalelwa ukuba uhlale kwisibhedlele sosuku kuphela, apho uya kunikwa ngononophelo olufunekayo kunye nokuphumla okulungileyo emini, kunye nemvume yokubuyela ekhaya ngokuhlwa. Kwimizuzu engama-24 kwi-kliniki yesigulane bayakusindiswa kwiisongelo ezingathí sina zokukhulelwa kwesisu, okanye kwabo bafazi abanesifo esiphathelene nezifo ezichaphazela ukukhulelwa.
Kuxhomekeke kwisizathu sokuhanjiswa kwakho esibhedlele. Ugqirha kufuneka ngokukhawuleza ahlole isantya sobungozi kumntwana kwaye enze isicwangciso kuwe ukuba uqhubeke nokukhulelwa kwakho. Into ephambili kweli shishini kukuthembela ugqirha wakho kwaye ungathandabuzeki ubuchule bakhe. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba kufuneka ube neentloni malunga nokuxoxa ngokuqeshwa kwakho. Ekugqibeleni, wena uhlola ingozi kunye nenzuzo yokusebenzisa inkqubo ethile okanye iziyobisi.
Ngokuqhelekileyo, ngexesha lokukhulelwa, ukusetyenziswa kwezidakamizwa akunakucetyiswa. Ziziphi izinto esibhedlele? Apha ukusetyenziswa kwabo kugwetyelwe kuphela ukuba inzuzo yabo yokugqibela idlula umlinganiselo wengozi. Ngamanye amazwi, xa umntwana efa nje ngaphandle kwamayeza, kungcono ukuwathatha, ngaphandle kokujonga ngepembelelo elifanelekileyo. Ugqirha uya kukuxelela malunga nokuba lukhulu kangakanani umonakalo wenzakalo kunye nezibonelelo ezinokubakho. Kodwa isigqibo siya kuhlala senu.
Ngaphantsi kweemeko ba zigcina?
Ngokuxhomekeke kwinqanaba lokubaluleka kwimeko kunye nezibonakaliso, umfazi okhulelweyo angaphila iintsuku ezingama-2-3 (ukuba lo lukulungiselelo lwezinto ezicwangcisiweyo) ukuya kwiiveki ezingama-40, ukuba kukho izifo ezinzulu. Ngokuqhelekileyo oku akunako, kodwa amacala xa umfazi ekhulelwe ngexesha lokukhulelwa lifumaneka. Oku kwenzeka xa ibhinqa linesifo senhliziyo esiswini, ukungaphumeleli kwezintso, okanye uhlobo olubi lwe-diabetes mellitus.
Nazi izizathu ezibalulekileyo ukuba kutheni ugqirha unokuncoma umfazi ukuba aye esibhedlele ukuze alondolozwe:
- ingozi ye-rhesus-conflict
- ezinye iintlobo zesifo sikashukela
- ubukho be-isthmico-cervical insufficiency
- i-hormonal disorders
- "ukuxhamla kwabasetyhini abakhulelweyo" okanye i-gestiosis
ukutshatyalaliswa kwegazi ngexesha elidlulileyo
- ukulimala emzimbeni
- engaphezu kweminyaka engama-35
- ubukho bokukhulelwa okubanzi
Yintoni ofuna ukuyilondoloza ?
Uya kufuneka uhambe nawe esibhedlele: ipasipoti, ilinen yokulala, izitya, i-bathrobe, ithayile ecocekileyo, isambatho sebusuku, ukutshintshwa kweengubo zangaphantsi, i-slippers (ikhaya kunye neerubha yokuhlamba), iiplanga zeesokisi, izinto zokuhlambulula umzimba (i-toothpaste ne-brush, idilesi, isepha, iphepha lokungasese). Ungathatha nokuba ufunde incwadi, iphephancwadi okanye ukuzisa i-laptop, ukuba unesiqinisekiso sokukhuseleko. Ngokuqhelekileyo, abasebenzi basebhedlele abaxanduva lwezinto ezixabisekileyo.
Khumbula ukuba ukugcina ukhulelwe kwaye uqinisekise ukuhamba kwawo okusemandleni akho. Ziphulaphule uze uqhagamshelane nogqirha wakho ngexesha elifanelekileyo.
Indlela yokuphatha igestosis kumabhinqa abakhulelweyo?
Indlela yokufaka izimonyo ebusweni bakho?
ULetizia Casta wazala intombi
Iindlela zonyango zonyango lwamathambo kwimilenze
Unokumelana njani nesilingo
Iimboba zeCrab kwi-batter